Twitter na-eru nso na mbipute mbipute | Gam akporosis
Twitter na-eru nso na ụdị akwụ ụgwọ
Ọ bụghị nke mbụ anyị na-anụ nke a adịchaghị version nke netwọk mmekọrịta nke obere nnụnụ. Nnwale ndị mbụ banyere ugwo nke Twitter Ha malitere site na afọ 2017. Mgbe o nwetachara data ịgba ụgwọ na-enweghị olileanya, Twitter kpebiri imepụta ndenye aha kwa ọnwa nke $ 99. Ya na onyinye ya nwere nkwalite nke ukwuu na akaụntụ ndị ahụ sonyere gaa ugwo oru. Jiri ọrụ a, akwụkwọ ndị ahụ - nke ihe ndekọ edenyere aha na ego ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa, ga-egosi karịrị ọtụtụ ndị ọzọ ma a ga-eduzi ya n'ụzọ ziri ezi nye ndị na-ege ntị.
Echiche bụ lekwasịrị anya na ịkwalite akụkọ na mbipụta karịa ịnye onye ọrụ ahụmịhe ahọrọ karịa. Nnwale ahụ adịteghị aka ma ọ nweghịkwa ihe ịga nke ọma. Mgbe a na-aga n'ihu na ndị ọrụ, ma lelee ka netwọkụ netwọkụ ndị ọzọ na - aga n’ihu n’inwe ọgụgụ ziri ezi, n’oge ọkọchị gara aga a tụgharịrị nhọrọ nke ịmepụta akaụntụ Twitter akwụ ụgwọ. N'okwu a, ee A na-eme ọmụmụ ihe iji nye akụkọ ndị a na ngwaọrụ na ọrụ ndị ọzọ adịghị maka ndekọ akụkọ.
Twitter akwụ ụgwọ, gịnị maka?
Maka ọtụtụ, ewezuga ihe ịga nke ọma dị egwu nke TikTok na uto nke Instagram, Twitter ka bụ onye na - elekọta mmadụ na ntanetị. na Ogologo afọ nke ndị ọrụ ya karịrị nke ndị ọrụ TikTok, na nke a na-eme gị ọdịnaya 'dị iche'. Ego nke ọnụ ọgụgụ ọha na eze nke ọchịchị onye na-eme ihe a na ntanetị. Ihe na eme anyi lee otutu na akwukwo mgbasa ozi nke Twitter. Ihe atụ kachasị doo anya, onye bụbu president nke United States.
Ma na-eche echiche banyere nsụgharị nke na-efu ego kwa ọnwa site na ndenye aha, Kedu ihe Twitter nwere ike inye anyị ka anyị wee chọọ ndenye aha? Ọ nwere ike ịbụ ngwugwu ngwugwu nke anyị ga-achọta enyemaka maka dezie foto, SEO maka mbipụta ma ọ bụ ọbụna karịa ohere nke Nhazi nke profaịlụ anyi na mbipụta. Enweghi ozi doro anya nke ị nwere ike ịnye anyị ụdị nke Twitter, ma ọ dịkarịa ala anyị nwere olile anya na ha anaghị ehichapụ ihe ọ bụla site na ụdị nweburu onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Twitter na-eru nso na ụdị akwụ ụgwọ
Xiaomi na aru oru na igwe nkpuchi juputara na ihuenyo Xiaomi Mi Mix Alpha 2?